Fanamarinana sy fiofanana momba ny haino aman-jery sosialy
Akorapulse Academy: mahazo mari-pahaizana amin'ny haino aman-jery sosialy
Alarobia, Novambra 11, 2020 Alarobia, Novambra 11, 2020 Douglas Karr
Nandritra ny folo taona mahery, mpampiasa hery sy masoivoho aho Agorapulse. Azonao atao ny manindry hatramin'ny lahatsoratra feno, saingy averiko ihany fa io no sehatra fitantanana haino aman-jery sosialy mora indrindra eo amin'ny tsena. Ny Agorapulse dia tafiditra ao amin'ny Twitter, Facebook, Pejy Facebook, Instagram, ary koa ny Youtube.
Mahagaga koa ny orinasa, manome torohevitra, paikady ary fanatsarana tsy tapaka hatramin'ny nanombohany. Loharano mahafinaritra iray hafa ananan'i Agorapulse ny Akademia izay anomezan'izy ireo anao mari-pankasitrahana izay mampiditra ny famoahana sosialy, ny fitantanana ny haino aman-jery sosialy, ny fihainoana ny media sosialy ary ny fanaovana tatitra an-tserasera.
Fampianarana sy fiofanana momba ny haino aman-jery sosialy
Akorapulse Academy dia mety ho an'ireo matihanina amin'ny marketing izay vaovao amin'ny haino aman-jery sosialy na te-hanampy ny fahalalany efa misy miaraka amin'ny rindrambaiko farany. Ny tsara indrindra, ny akademia dia Ny hitsin-dàlana (izany no anaram-bosotra fampianarana) izay manambatra ny lampihazo amin'ny paikady tokony hahombiazan'ny orinasanao na ny mpiasao.
Ny fampianarana dia mampifangaro horonan-tsary amin'ireo mpitarika indostrialy, fitaovam-pianarana, ary avy eo mamindra anao amin'ny alàlan'ny fampiharana ilay tetika na paikady ao anatin'ny sehatra Agorapulse. Ireto misy toko:
Fitaovana famoahana sosialy - ity toko ity dia misy ny famoahana profil iray na maromaro, fandaharam-potoana sy fitantanana lahatsoratra voalahatra, fananganana vondrona famoahana manokana, filaharana ary fitantanana poste queued, fampidinana atiny betsaka, workflows an'ny ekipa, kalandrie nozaraina, fampiharana ny laboiresy fanaovana tatitra, ary fampiasana ny fampiharana finday sy ny chrome extension .
Fitantanana ny resaka ara-tsosialy - ny boaty fampahalalam-baovao sosialy, fanangonana fanamarihana doka, fandraisana andraikitra amin'ny sivana, valiny sy hevitra, valim-panangonan-tsonia, fanamarihana, fanoratan-dàlana, fanafenana ary fanomezana valiny, amin'ny alàlan'ny mpanampy boaty, sy ireo mpampiasa manoratra.
Tatitra momba ny haino aman-jery sosialy - mijery tatitra, manondrana tatitra, miasa miaraka amin'ny marika, ary manangana tatitra momba ny herinaratra.
Mihaino ny haino aman-jery sosialy - fihainoana amin'ny tamba-jotra sosialy (afa-tsy Facebook sy LinkedIn izay tsy hamela azy), fanaraha-maso sy fanavaozana ny fihetseham-po, amin'ny filazanao ny mombamomba anao, amin'ny teny tsy ofisialy, na teny lakile, amin'ny URL, ary koa ny fitantanana ny valin'ny fihainoanao.
Ny toko tsirairay dia mifarana amin'ny quiz fanazaran-tena (izay tsy misy fiatraikany amin'ny fanadinana fanamarinana anao) fa manome anao ny fampahalalana azonao atao ny mamerina. Misy ihany koa ireo hetsika asaina omena anao hidiranao amin'ny kaontinao Agorapulse raisina.
Ity fanadinana fanamarinana ity dia mizaha ny fahalalanao ireo singa tena ilaina ao media marketing sosialy izay tokony ho fantatry ny mpanao media sosialy rehetra. Ny fandalovana amin'ity fanadinana ity sy ny fahazoana ny fanamarinana anao dia hahafahanao mampiseho ny fahaizanao sy ny fahaizanao amin'ny haino aman-jery sosialy ary ho lasa mpitsabo miaraka amin'i Agorapulse.
Nandray ny fampianarana androany aho ary Izaho dia (ofisialy) manam-pahaizana momba ny Agorapulse!
Midira izao amin'ny Agorapulse Academy
Fanambarana: masoivoho Agorapulse aho ary mpiara-miasa amiko.
Tags: fanamarinanafanamarinana amin'ny media sosialykilasy media sosialyhaino aman-jery sosialyfanabeazana amin'ny haino aman-jery sosialy
Fotoana hananganana ny RSS RSS anao amin'ny maty
Oct 25, 2011 amin'ny 5: 46 AM
Tsara ho fantatra!